Ihe ngosi Xiaomi Mi 2 ga - abia na 8 GB nke Ram dika ihe oyiyi ndi a | Gam akporosis
Ihe ngosi Xiaomi Mi 2 ga-abia na 8 GB nke Ram dika onyonyo ndị a leaked
José Alfocea | | Xiaomi
Otu n'ime gam akporo ngwaọrụ na-eme ka ị na-eche ihe kasị a 2016 bụ Xiaomi Mi Rịba 2. Ọ bụ naanị usoro nke smartphones sitere na ụlọ ọrụ China nke emebeghị ka ọ dị ọhụrụ n'afọ a, anyị na-abanyekwa ọdịda.
Agbanyeghị, ogologo oge a na - enyere ndị na - ehi mmiri aka ịba ụba nke ukwuu nke na anyị nwere ike ịsị na anyị maara ihe niile gbasara ọdụ ọhụrụ Xiaomi ọhụrụ a Ikpeazụ nke leaked oyiyi, dị ka ị ga-ahụ n'okpuru, na-ekpughe na Anyị nwere ike ihu na mbido nso nso nke smartphone nwere nnukwu RAM na ahịa: 8 GB.
1 Xiaomi Mi Note 2 na-eche, mana nkwa
1.1 Ọ ga-abịa na ụdị Pro
Xiaomi Mi Note 2 na-eche, mana nkwa
Kemgbe mmalite nke Xiaomi Mi Note, anyị ahụlarị mmelite abụọ na usoro Redmi Rịba ama, agbanyeghị, na ụdị a, anyị ka na-eche. O yikwara ka Xiaomi na-enweta ụtọ nke idebe anyị atụ anya.
Luckily na na-aga n'ihu leaks Ha na-eme ka mmụọ anyị dị jụụ, ma ọ bụ ikekwe na-eweta atụmanya ka ukwuu? Ka o sina dị, Xiaomi's Mi Note 2 na-abịa, ọ bụ ihe gbasara ụbọchị, ma ọ bụ ikekwe izu ole na ole, izu ole na ole.
A ọnụ ọgụgụ buru ibu nke asịrị, ntapu, benchmark oyiyi na ndị ọzọ na ọdịnaya na-ama na-ekesa na netwọk na-ekpughewo ọtụtụ nke e ji mara nke a ọhụrụ phablet, Otú ọ dị, nkwụsị kachasị na-adịbeghị anya na-ekpughe ọnụ ya na 8 GB nke RAM na nchekwa dị n'ime nke 256 GB.
Site na njirimara ndị a, Xiaomi Mi Rịba ama 2 nwere ike ịbụ ama nwere ebe nchekwa RAM kachasị elu na ahịa niile dị ugbu a.
N'ime afọ gara aga, anyị ahụla ka ọtụtụ ekwentị gam akporo dị elu si bulie ụkpụrụ ha site na 3 GB na 4 GB. Na mgbakwunye, ụzọ ahụ dị ka nke na-aga n'ihu na-aga n'ihu nke nkwụsị ya ọzọ bụ 6 GB. Agbanyeghị, Xiaomi Mi Note 2 ga-abịa 8GB, nke bụ nnukwu mmali.
Ọ ga-abịa na ụdị Pro
Dịka ị pụrụ ịhụ na onyogho a yọchara, aha a kapịrị ọnụ nke ọnụ a Xiaomi bụ Mi Note 2 Pro. Ọfọn ee, anyị ka na-eche Mi Note 2 "nkịtị" na ihe niile na-egosi na ụlọ ọrụ na-ama na-arụ ọrụ na a Pro version na, anyị na-eche, ga-oru dịtụ mgbe e mesịrị, dị ka ọ mere na ọgbọ nke atọ nke a ọnụ. Otú ọ dị, eziokwu ahụ bụ na anyị na-ahụkarị onyinyo a na-agbapụ agbapụ na-egosipụtakwa na Xiaomi nwere ike ịmalite Mi Note 2 na Mi Note 2 Pro n'otu oge.
Na mgbakwunye na nomenclature ya na ndị anụ ọhịa ahụ 8 GB nke RAM, anyị nwere ike ịhụ ka nke a si Xiami Mi Note 2 Pro ga-abịa ọkọlọtọ na sistemụ arụmọrụ gam akporo 7.0 Nougat, ihe ndị ọrụ ga-enwe ekele maka enweghị obi abụọ. Agbanyeghị, dịka ị maraworị, a ga-enye nnukwu akụkụ nke sistemụ a n'okpuru ụlọ ọrụ nhazi nke ụlọ ọrụ, sistemụ MIUI, na-adọrọ mmasị karịa site na nke anya.
Ọ bụrụ na omume dị na RAM ebe nchekwa nke smartphones bụ ịrị elu ya mgbe niile, otu ihe ahụ na-eme na nchekwa dị n'ime. Qualitybawanye foto dị mma na vidiyo, ma ọ bụ egwuregwu nwere nnukwu graffiti, na-achọ ohere karịa n'aka onye ọrụ iji chekwaa. Na n'echiche a, ọ dị ka nke ahụ Xiaomi ga-ebido Mi Note 2 Pro na nhọrọ 256GB n'ime nchekwa. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nke a na enwere ike ịgbasa ikike a site na kaadị micro SD, anyị na-ahụ ọnụ na-enweghị nsogbu ohere ọ bụla.
N’ikpeazụ, anyị rutere n’obi nke Mi Note 2, onye nhazi ya. A na-atụ anya ka ọnụahịa ọhụrụ Xiaomi na-arụ ọrụ mgbawa dị ike Qualcomm Snapdragon 821, nke na-enye nsonaazụ nke ọma karịa Snapdragon 820, n'agbanyeghị ezigbo nsonaazụ nke o nyekwara, dịka ọmụmaatụ, na Mi 5 n'onwe ya.
Dị ka ọ dị na mbụ, ọhụụ ọhụrụ Xiaomi Mi Note 2 dị ka nke kachasị elu na ọdụ ndị ọzọ yiri ya n'ahịa. Ma anyị nwere olile anya na ọnụahịa ya ga-adịgide, dịka ọ dị na mbụ, nwere ya. Ugbu a ụlọ ọrụ ahụ ga - akwụsị ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Ihe ngosi Xiaomi Mi 2 ga-abia na 8 GB nke Ram dika onyonyo ndị a leaked
Anyị na-enyocha Google Allo, ngwa izi ozi ya na Google Assistant, na vidiyo
The Doogee F7 na Helio X20 processor ga-ebelata ahịa na mbelata nke 50 euro